Torolalana ho an’ny bilaogera sy ny mpanohitra an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2018 3:12 GMT
Namoaka ny “Torolalana ho an'ny bilaogera sy ny mpanohitra an-tserasera” ny Reporters Sans Frontières ny 22 Septambra 2005. Azo alaina ao amin'ny tranonkalan'ny RWB amin'ny fiteny miisa dimy (Anglisy, Frantsay, Persiana, Shinoa ary Arabo) izany ary ahitana lahatsoratra momba ny “famahanana bilaogy tsy fantatra anarana” nosoratan'i Ethan Zuckerman izay nohazavaina tao amin'ny wiki Global Voices. Hizara ny sombiny sasantsasany avy amin'ny torolalana izahay ary atombokay amin'ity famariparitana fohy ity izany:
Mampientana olona ny bilaogy. Na hoe manakorontana sy mampiahiahy azy koa ireny. Misy olona tsy matoky azy ireo. Ny hafa mahita azy ireo ho toy ny lohalaharana amin'ny revolisiona vaovao ho an'ny fampahalalam-baovao. Satria mamela sy mandrisika ny olon-tsotra hiloa-bava izy ireo, fitaovana goavana amin'ny fahafahana maneho hevitra ireny.
Ny bilaogera matetika no hany mpanao gazety tena izy any amin'ireo firenena izay hisian'ny fampahalalam-baovao mahazatra voasivana na ny fampahalalam-baovao mahazatra iharan'ny tsindry. Izy ireo ihany no manome vaovao mahaleotena, amin'ny mety tsy hahafaly ny governemanta sy ny mety hisian'ny fisamborana azy indraindray.
Namoaka ity boky ity mba hanampiana ireo bilaogera ny Reporters Sans Frontières, miaraka amin'ny toro-hevitra ilaina sy ny toro-hevitra ara-teknika momba ny fomba hijanonana tsy mitonona anarana sy hialana amin'ny sivana, amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fomba mety indrindra ho an'ny toe-javatra mitranga tsirairay. Manazava ny fomba hananganana sy hanomezan-danja indrindra ny bilaogy, ny hampahafantarana izany (hametrahana azy ho lohalaharana eo amin'ny fitaovam-pikarohana) ary ny hametrahana azy mba ho azon'ny mpamaky antoka amin'ny alalan'ny fanarahana ireo fitsipika fototra momba ny fitsipi-pitondrantena sy fanaovan-gazety ity boky ity.
5 minitra izayAzia Afovoany sy Kaokazy